Matam Foam Folding Mat, Geli Padsiyada Wadooyinka, Warshadaha Jidka Jidka - Baoerxi
Waxaan leenahay tikniyoolajiyad horumarsan iyo qalabka wax lagu hago wax soo saarkayagu waxaa ka mid ah PE, EVA, EPDM, NBR / PVC iyo noocyo kala duwan oo sariirta isboortiga midabka. Waxaan leenahay in ka badan 40 qaab oo ah suufka jilibka, Kuwaas oo caan ku ah Yurub, Koonfur Bari Aasiya, Waqooyiga Ameerika iyo Bariga Dhexe iwm. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa dayactirka baabuurta, dhismaha, alxamida, korontada, isboortiga, jardiinada iyo dalabaadka kale ee warshadaha.
Shaqada Guriga EVA Mat Gardening Mat Kneeler Knee Gu ...
Alaabada caaga ah ee Baoerxi
Meey 11, 2020
Ujeedada jardiinadu waxay u egtahay inay kujirto waxyaabo badan oo qodis ah iyo qodid iyo carrada hareeraha ciidda, badiyaa laxiriirta ka saarista haramaha ama gogosha jilicsan. Had iyo jeer way fiican tahay in ...